INetflix izothuthukisa ukulawula kwabazali kokuqukethwe kwayo | Izindaba zamagajethi
INetflix izothuthukisa ukulawula kwabazali kokuqukethwe kwayo
Ungumsebenzisi weNetflix futhi unezingane ekhaya? Lolu lwazi luzoba nentshisekelo kuwe. Futhi ukuthi ukwazi ukugcina ukulawula okuphelele kwalokho okusetshenziswa abancane endlini ngezinsizakalo ezinjengeNetflix, kungaba yimpumelelo. Futhi inkampani iyazi ukuthi abazali - sikhathazekile ngalolu daba. Kungakho nje wenze isimemezelo ezinyangeni ezimbalwa ezizayo: izonikela ngamathuluzi okuphatha kangcono abazali.
Njengoba kubikwe yiNetflix uqobo ngebhulogi yayo yenkampani, ezinyangeni ezizayo izokwethula izinguquko ekulawuleni kwabazali kwisevisi yayo yevidiyo ngokufunwa (VBD) noma ividiyo ekufunweni (VOD). Bayazi ukuthi ikhathalogu yabo ibanzi futhi banochungechunge namabhayisikobho akho konke ukunambitheka nobudala. Kepha bakhetha ukuthi abazali uqobo lwabo balawule lokhu futhi kube yibo ababeka imingcele.
Ukuphawula kweNetflix kokukodwa kwayo isitatimende esisemthethweni: "Siyaqonda ukuthi umndeni ngamunye ungumhlaba nokuthi abazali ngokwabo bayahluka kulokho abakubona kufanelekile ngokweminyaka ngayinye." Futhi abanaphutha. Kusuka lapho Kungasungulwa ikhodi ye-PIN yalokhu okuqukethwe okungangeni kumkhawulo wokuhlukaniswa kweminyaka. Lokhu kungaba:
G: izingane ezincane kuze kube yiminyaka eyi-9
PG: izingane ezincane ezineminyaka eyishumi kuya kwengu-10 ubudala
PG-13: izingane ezineminyaka ephakathi kuka-13 no-16 ubudala
R: intsha kuze kube yiminyaka eyi-17
PG-17: yonke eminye iminyaka kusukela kubudala beningi
Kepha lapha akuyona yonke into. Futhi ukuthi izinyathelo ezibhekwa yiNetflix ziqhubekela phambili. Kungani? Hhayi ngoba futhi vumela abazali ukuthi babeke imigoqo nezilawuli zabazali kokuqukethwe okuthile; Ngamanye amagama, uma ucabanga ukuthi uchungechunge oluthile noma ama-movie awafanele amadodana noma amadodakazi akho, manje kufanele uye kulelo thuluzi kuphela, faka isihloko sokuqukethwe bese ukumaka njengokungafanele. Ohlakaniphile. Noma kunjalo, alukho usuku oluthile lokuqalisa ukusebenza kwalo: luzofinyelela kuwo wonke amadivayisi ahambisana neNetflix nazo zonke izimakethe zomhlaba ezinyangeni ezizayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Ama-movie nochungechunge » INetflix izothuthukisa ukulawula kwabazali kokuqukethwe kwayo
Ucingo olukhanyayo 2: ifoni elula kunazo zonke emhlabeni enesikrini sikayinki